Twins Poupée: [ Review ] Miracle Food 10 solution toner ( Skin Food )
[ Review ] Miracle Food 10 solution toner ( Skin Food )
[ မြန်မာ] / ENG လို review အတွက် အောက်ကို scroll down လုပ်ပါ ^-^
skinfood brand က vegetables and fruits တွေနဲ့ လုပ်တဲ့ skincare မှာနံမည်ကြီးပါတယ် .
အခု product ကလဲ သဘာဝ ၁၀ မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် Youngji (lingzhi), Black Raspberries,Black tea, Maqui berries, Wormwood, spinach, white ginseng, Quinoa, Honey, carrots. နဲနဲ အသက်အရွယ် ရလာလို့ over 25 တွေ စသုံးလို့ရပါတယ် .
Instructions/Ingredients ( BOX Cover )
anti wrinkle အရေးအကြောင်းတွေ ကို အဓိကထိန်းသိမ်းပေးပြီး brightening အသားအရေကြည်လင်မယ် moisturising ရယ် antioxident ဖြစ်စေမယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေပါ ပါတယ် .
သူက toner လို့သာပြောတာ ရိုးရိုး အကြည် toner type မဟုတ်ပါ. နို့ရည် watery type ပါ. cotton pad နဲ့သုံးပေးပါ လို့ အညွှန်းမှာရေးပေမဲ့ korea drama တွေမှာ actors, actress တွေက ညဘက်ကျရင် မျက်နှာကိုပါးပါးလေးပုတ်ပြီး လိမ်းတဲ့ အရည်လိုမျိုး ပါ .လိမ်းရတာပေါ့ပါးပြီး အနံကတော့ သနပ်ခါးအနံပါ . ညဘက် skincareတွေ အထပ်ထပ်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ok ပါတယ် . အမတို့ကတော့ ဒီ product ကို 《night skincare 》၁ပတ် ၂ခါလောက်ပဲသုံးတယ်. ကျန်နေ့တွေက အခြား skin care တွေသုံးရသေးတာမို့ပါ. ▪ skinfood brand ထဲက အညစ်အကြေးတွေ, ဆားဝက်ခြံတွေ ပျောက်ချင်တယ် cotton pad နဲ့ အသုံးပြုရတဲ့ black sugar toner ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်《best seller 》 ▪
အခုတော့ ဒီ toner ကိုသုံးနေတာ ၁လ ရှိပါပြီ. effect ကတော့ တအားကြီးမသိသာသေးပါ. toner မို့လို့ထင်ပါတယ် . moisture နဲ့ Brightening တော့ ok သား . anitoxident effect ကတော့သိပ်မဖြစ်သလိုဘဲ . အရေးအကြောင်းကတော့ over 25 ဆိုပေမဲ့မရှိသေးဘူး 😆 ကာကွယ်တဲ့သဘောအတွက်သုံးတာပါ. အရေးအကြာင်းအတွက်ဆို ဒီထက်ကောင်းတဲ့ productသုံးပါလို့ အကြံပေးပါတယ်. ပါဝင်တဲ့ ingredients တွေကတော့ ကောင်းပါတယ် . အကောင်းတွေပဲပါတော့ ဈေးကမသက်သာဘူး 😂 😂 ဖန်ဘူးဖြစ်တာလဲပါမယ် .သူက အလေးကြီး .. အမတို့က normal plastic ဘူးပဲထင်တာ . pump style ဖန်ဘူးပါ.
( EXP and Manufacture Date )
ဒီ products မှာ Toner, Emulsion , Serum, Cream, Eyecream , Eyespatch, Mask Sheet တွေရှိပါတယ်၊ series လိုက်သုံးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့
ဘယ် product မဆို effect ပိုသိသာချင်ရင်တော့ serum ကိုအရင်သုံးကြည့်ပါ
Suggestion : Night skincare routine အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးချင်တယ် over 25 anti aging , brightening ကိုလဲသိသာချင်တယ် ဈေးနှုန်းလဲ OK တယ်ဆို ဒီ product လေးစမ်းသုံးကြည့်ပါ serum နဲ့တွဲသုံးကြည့်ပါလို့အကြံပေးပါတယ် 🍀
Repurchase again ? Maybe try serum
Package : 3/5 ( heavy weight )
Smell : 4/5 ( do not like thanaka smell )
Effective : 3/5
Price : 25 USD , 27000 KRW
Posted by Teammist at Monday, April 03, 2017